FBC - Qorannoon magaalotatti wiirtuuwwan kilaastaraa industirii ijaaruu dandeessisu xumurame
Qorannoon magaalotatti wiirtuuwwan kilaastaraa industirii ijaaruu dandeessisu xumurame
Finfinnee, Bitootessa 11, 2009 (FBC)Qorannoon magaalotatti wiirtuuwwan Kilaastaraa Industirii ijaaruu dandeessisu xumurame.
Ejansiin Misooma industirii Maanifaakchariingii Xixiqqaa fi Giddu-galeessaa Federaalaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetii akka ibsetti qorannoon dizaayina ijaarsaa Wiirtuuwwan Kilaastara Industirii magaalota xixiqqaa keessatti heektaara 50 irratti, magaalota Giddu-galeessaa keessatti Heektaara 100 irratti, Magaalota guguddoo keessatti heektaara 250 irratti qubachuu danda’anii xumurameera.
Daayirektarri Olaanaa Ejansichaa Obbo Asfaaw Abbabbaan akka jedhanitti gorsitoonni biyya alaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraadhaa iddoowwan sadii akka saamudaatti fudhachuuni qorannoo kana kan geggeessan.
Wayita ammaas qorannichi gara naannoleetti ergamuusaa kan ibsan daayirektarri olaanaa kun, wiirtuu kilaastara industirii isaaniif kenname hanga waggaa shaniitti ijaaranii xumuruu isaan irraa eegama. Zufaan kaasaahuntu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Biiruchi qaamolee raawwii gaarii agarsiisanii fi deggarsa kennanii beekamtii fi badhaasa kenne	Kaampaanonni hidhicha irratti qo’annoo geggeessan akka sagantaa yeroo ba’eefitti qorannucha geggeessaa akka jiran ibsame »